प्रधानमन्त्रीको घाँटीमा अपमानको घाँडो झुण्डियो :रबिन्द्र मिश्र « Postpati – News For All
प्रधानमन्त्रीको घाँटीमा अपमानको घाँडो झुण्डियो :रबिन्द्र मिश्र
मङ्सिर १८, काठमाडौँ । युनिभर्सल पिस फेडरेसनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ स्वरूप १ लाख डलर सहित सम्मान गरेको थियो । उक्त बिषय यतिबेला सामाजिक संजालमा निकै विवादास्पद बनेको छ ।
एकपछि आर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओली यहि प्रसङ्गलाई लिएर बिबेकशील साझा पार्टीका संयोजक रबिन्द्र मिश्रले निकै खरो आलोचना गरेका छन् ।
मिश्रले खरो आलोचना गर्दै आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा भनेका छन् – ‘यो त अति भयो। तपाईं देशको प्रधानमन्त्री – हामी सबैको प्रधानमन्त्री। देशको प्रधानमन्त्रीले जसले जे पुरस्कार दियो, त्यसैका लागि शिर नुहाउने? धर्म प्रचारक संस्थाले दिएको पुरस्कार थाप्ने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रहण गरेको पुरस्कारको औचित्य नभएको जनाउदै प्रश्न गरेका छन्, ‘कि निर्मलालाई न्याय, वाइड बडी विमान, राष्ट्रपतिलाई गाडी, भ्रष्टाचारका अन्य मामिला तथा विकास आदि सबै विषयमा गज्जब काम गरेको छु भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ ?’
अत्याधिक बिबादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको संलग्नता भएको भनेर चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ ।
रबिन्द्र मिश्रले लेख्नु भएको विचारको पुरा अंश तल हेर्नुहोस:
यो त अति भयो। तपाईं देशको प्रधानमन्त्री – हामी सबैको प्रधानमन्त्री। देशको प्रधानमन्त्रीले जसले जे पुरस्कार दियो, त्यसैका लागि शिर नुहाउने? धर्म प्रचारक संस्थाले दिएको पुरस्कार थाप्ने?
त्यसमा पनि देशमा खराब नेतृ्त्व र कुशासनका लागि हरदिन यति बिघ्न आलोचना भैइरहेका बेला “नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार” लिन अफ्टेरो लागेन?
कि निर्मलालाई न्याय, वाइड बडी विमान, राष्ट्रपतिलाई गाडी, भ्रष्टाचारका अन्य मामिला तथा विकास आदि सबै विषयमा गज्जब काम गरेको छु भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ?
हुनत, बारम्बार जनताकै मत जितेर आउनु भएको हो। संभवत: हामी नेपाली तपाईंकै लागि योग्य छौं भन्ठान्नुभएको होला। तपाईंको त्यो भ्रम अब लामो समय टिक्नेवाला छैन’